Published June 16, 2020 at 10:43 PM CDT
Ji’a 1 dura, Buena Vista kessatti nama 75 qabame, har’aa kara 1,600 ti, akkasumas har’a nama qabame 3 qofa gabaasan. Sababa rakko kanaa Wal-Mart kan Storm Lake keessatti argamuu qulqulleesuf hanga kamasaa ganamaati ni cufama.
Magaala sioux city naannawa metro tti dhukubni kun suutuman xiqqaata dhufaara. Manni fayyaa Dakota County namni 1 dabalataan akka qabame gabaasan, waliigalatti kaa qabame 1,742 gaheera. Dakota County keessatti kaa du’e 32 dha.
Magaala sioux city keessatti hospitaali lama lakkoofsa xiqqaa waliitti dabaluun dhukubsata covid-19 galmeesaniiru, ergaa data May irraa galmaahera.
Jecha humna keessatti, MercyOne kaa Siouxland medical center fi UnityPoint Health- St.Luke’s akka jedhetti dhukubsatoota Covid-19 47 yaalu akka jiran himan.
Hospitaali lama kaluu kanatti akka jedheti dhukubsattoota covid-19 400 counties 10 ol kaan akka kuta Iowas, Nebraska fi South Dakota qarqaaru jiruu himan.
Magaala Sioux city keessatti galmii magaala akka himeti, poolii/biirowaanni kan balaa ibiddaa galmii Wiyxata sa’aati 8 a.m. irraa ni banama. Gaadis paarkiidhaaf, Anderson Dance Pavilion fi paarkin Cone Lodge Jum’aa, June 26 irraa nii argamaa garuu qaxaroodhaani.
Governor Iowa Kim Reynolds filannoo November kan waliigala dura seerii uf jalatti kan ajaja argamtu mallatteesuf karoora akka qabdu himteerti.
Kim northern Iowas keessatti itti aanaa mootumma Mike Pence wajjiin guyaa ofi dabarsite jirti. Mike qaraale wayta Covid-19 guddate ture May keessaa Iowa dhufe turee.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyMike PenceNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsMercyOneUnityPoint Health St. Luke'sOromoCOVID-19 deathsBuena Vista CountyWalmart